Covid 19 Antigen Rapid Test -Covid 19 Test Kit mpanamboatra- BALLYA
Kitapo fitsapana antigen Covid 19
Inona no atao hoe fitsapana haingana ny antigen covid-19?
Fitsapana haingana antigen Covid 19 dia ampiasaina amin'ny famaritana qualitative ny novel antonony coronavirus (SARS-CoV-2) amin'ny santionany, ho an'ny fampiasana diagnostika in vitro ihany. Ireo novakin'ny coronavirus dia an'ny β genus. SARS-CoV-2 dia areti-mifindra mahery vaika. Mora tohina ny olona amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana izao, ireo marary voan'ny virus coronavirus no loharanon'ny aretina; ny olona voan'ny asymptomatika dia mety hiteraka loharano mifindra koa. Miorina amin'ny fanadihadiana momba ny epidemiolojika ankehitriny, ny vanim-potoana fampidirana zaza dia 1 ka hatramin'ny 14 andro, ny ankamaroany dia 3 ka hatramin'ny 7 andro. Ny tena fisehoana dia ny tazo, havizanana ary kohaka maina. Ny fitohanana eo amin'ny orona, ny orona, ny tenda, ny myalgia ary ny fivalanana dia hita amina tranga vitsivitsy.
Ny antigen dia mazàna hita amin'ny santionan'ny taovam-pisefoana ambony mandritra ny dingan'ny aretina mahery vaika. Ny famaritana haingana ny aretina SARS-CoV-2 dia hanampy ireo matihanina amin'ny fitsaboana hitsaboana ireo marary ary hifehy ny aretina amin'ny fomba mahomby sy mahomby.
Fampianarana ho an'ny fampiasana kitovan'ny andrana Covid 19 Antigen
Endri-tsarin'ny kitapo fanandramana antigen covid 19
Famaritana haingana 15 minitra
Fanangonana swab nasopharyngeal na fanangonana rora ny virus
Fampisehoana mampiavaka ny Kitapo fanandramana Antibody Covid 19
Nahatratra 301 ny santionany speichel nahitana santionany miisa 118 ary santionany ratsy 183. Ny santionany rehetra dia nampitahaina tamin'ny ABI 7500 PCR tena izy valin'ny fikarohana, miaraka amin'ny kitika BGI Europe A / S sy ny RT-PCR fluorescent amin'ny fotoana tena izy mba hahitana ny SARS-COV-2. Ireto misy ny valiny:
Sensitivity 97.46%, 95% elanelam-pahatokisana 92.19% ka hatramin'ny 99.34%, ny fahamendrehana 99.45%, ny elanelan'ny fahatokisan-tena 95% 96.53% ka hatramin'ny 99.97%, ny tahan'ny fifanandrinana 98.46%.
Fitsipiky ny COVID-19 Antigen Rapid Test
The fitsapana haingana antigen covid 19 dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fanehoan-kevitra momba ny antibody-antigen tena manokana sy ny teknolojia famolavolana immunochromatographic fametahana koloida volamena. Ny reagent dia misy antibody monoclonal SARS-CoV-2 namboarina tao amin'ny faritra fitsapana (T) amin'ny membrane sy ny SARS-CoV-2 antibody monoclonal mifono amin'ny fifangaroan'ny volamena pad-colloidal. Ny santionany dia atsofoka ao anaty santionany ary mihetsika miaraka amin'ny antibody monoclonal SARS-CoV-2 izay mifamatotra amin'ireo sombin-boloky koloidia efa voarohy rehefa mitsapa. Avy eo ny fifangaroana dia chromatographed up miaraka amin'ny capillary effects. Raha tsara izy io, ny antibody mitondra ny marika kôlôla volamena dia hifamatotra voalohany amin'ny viriosy SARS-CoV-2 amin'ny santionany mandritra ny chromatography. Avy eo ny conjugates dia voafatotry ny antibody monoclonal SARS-CoV-2 miorina amin'ny membrane, ary misy tsipika mena hita eo amin'ny faritra andrana (T). Raha ratsy dia tsy misy tsipika mena eo amin'ny faritra andrana (T). Na misy antigèra SARS-CoV-2 na tsia ilay santionany dia hisy tsipika mena hiseho eo amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C). Ny tsipika mena miseho ao amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C) no fenitra hitsarana raha toa ka misy ny santionany ary raha ara-dalàna ny fizotran'ny chromatographic, ary izy io koa dia ampiasaina ho fifehezana anatiny ho an'ny reagent.
COVID-19 Fomba fitsapana antigen
Ny karazana swab:
1. Fanangonana santionany
Atsofohy boribory amin'ny lambam-baravarankely (tariby na plastika) amin'ny alàlan'ny vavorona mifanila amin'ny lanilany (tsy miakatra) mandra-pifanatrehana ny fanoherana na ny halavirana dia mitovy amin'ilay avy amin'ny sofina ka hatrany am-bavoron'ilay marary, izay manondro ny fifandraisany amin'ny nasopharynx. Ny savony dia tokony hahatratra ny halavany mitovy amin'ny halavirana amin'ny vavorona ka hatrany amin'ny fanokafana ivelany ny sofina. Mikosoka moramora sy mihodina ilay savony. Avelao ny fehin-kibo amin'ny toerany mandritra ny segondra maromaro mba handraisana tsiambaratelo. Esory moramora ny swab mandritra ny fihodinana. Ny specimens dia azo angonina amin'ny andaniny roa amin'ny alàlan'ny swab iray ihany, fa tsy ilaina ny manangona santionany avy amin'ny andaniny roa raha feno ny tsiranoka avy amin'ny fanangonana voalohany ny minitip. Raha mivily
septum na fanakanana dia miteraka fahasarotana amin'ny fahazoana ilay santionany amin'ny vavorona iray, ampiasao ilay savony iray ihany hahazoana ny santionany amin'ilay vavorona hafa.
1. Ampidiro am-pitandremana fehin-kibo azo esorina, omena miaraka amin'ny kitanao ao anaty vavorona iray. Ampiasao ny fihodinana malefaka, atosiho ny savony hatramin'ny 2.5cm (1 santimetatra) avy eo amoron'ny vavorona.
2. Ahodino in-5 ny swab amin'ny mucosa ao anaty vavorona mba hahazoana antoka fa manangona santionany.
3. Ampiasao ilay savony iray ihany, avereno ity dingana ity ao amin'ny orona orona hafa mba hahazoana antoka fa misy santionany azo alaina avy amin'ny lava-orona roa.
4. Esory amin'ny fonon'ny orona ny swab. Ny spiment dia vonona amin'ny fanomanana amin'ny fampiasana fantsona buffer fitrandrahana.
Ampidiro swab ao amin'ny faritry ny faritry faritany sy ny tonsillar. Atsofohy ny andry roa amin'ny vatan'ny tonsillar sy ny oropharynx any aoriana ary aza mikasika ny lela, nify ary ny siligaoma
2. Fanesorana santionany
(1) Esory ny saron'ny buffer fitrandrahana. Ampio ny buffer fitrandrahana rehetra ao anaty fantsom-pifandraisana misy santionany 0.5 ~ 1mL.
(2) Ahintsano tsara, ary tazomy ao anaty fantsona fanehoan-kevitra mandritra ny 1 minitra ilay mbola eo.
(3) Ahintsano indray ny fantsom-pifandraisana alohan'ny hanaovana ilay fitsapana.
(Ny sary dia ho an'ny referansa fotsiny, azafady mba jereo ny torolàlana ampiasaina)
3. Fiasan'ny detection
(1) Ento ny santionany, kit ny fanandramana ary fanaraha-maso hafa mba hiverenana amin'ny hafanan'ny efitrano alohan'ny fitsapana.
(2) Manokatra paosy misy kasety fitsapana. Apetraho eo amin'ny faritra maina sy marindrano ny kasety fanandramana.
(3) Tazomy mitsivalana ilay tsiranoka ary afindrao ny santionan-drano mitete 3 ho an'ny santionan'ny kasety fitiliana.
(4) Jereo ny valiny naseho tao anatin'ny 10-15 minitra, ary ny valiny dia niseho taorian'ny 15 minitra
Tsy misy dikany amin'ny klinika.
Ilay karazana rora
(1) Alohan'ny hanangonana rora, alao ny takolakao ary hosory moramora amin'ny rantsan-tananao mandritra ny 15-30 segondra, mandrora morora ao anaty paosin'ny fanangonana.
(2) Alefaso ao anaty fantsona fitrandrahana ny vahaolana buffer fitrandrahana.
(3) Afindra amin'ny fantsona fitrandrahana ny rora
(4) Hikorisa fantsona fitrandrahana 10 segondra
(4) Jereo ny valiny hita tao anatin'ny 10-15 minitra, ary ny valiny dia hita taorian'ny 15 minitra tsy misy dikany ara-pahasalamana.
Famaritana ny valin'ny fitsapana ny Covid 19 Antigen
ratsy : Tsipika mena ihany no hita ao amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C), ary tsy misy tsipika mipoitra ao amin'ny faritra andrana (T).
tsara : Tsipika mena roa no miseho. Ny iray dia eo amin'ny faritra andrana (T) ary ny iray hafa dia eo amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C).
Tsy mety : Tsy misy tsipika mena aseho ao amin'ny faritra fanaraha-maso kalitao (C). Midika izany fa niharatsy na simba ny fandidiana diso na ny cassette fitsapana. Avereno kitapo vaovao ny fitsapana. Raha maharitra ny olana dia ajanony avy hatrany ny fampiasana io laharana lotera io ary mifandraisa amin'ny mpamatsy anao eo an-toerana.
Fanamarihana: Ny santionany tsy mety dia tokony ho raisina ho toy ny loto mandoto, ary ny santionany dia tokony hangonina indray.
FAQs test ho an'ny kitapo antigen 19 an'ny Covid
Q: Inona no mahasamihafa azy covid 19 PCR fitsapana ary kitapo fitsapana antigen 19 covid?
A: Fomba fikarohana roa samihafa. Fotoana fanandramana koba 19 PCR fitsapana dia mila fotoana be dia be hamaranana ny fitsapana, ny fitsapana haingana ny antigen covid 19 matetika dia midika hoe fomba volamena koloidaly, famerenana fotoana fohy, latsaky ny 15 minitra.
Q: Afaka mampiasa ve aho kitapo fitsapana antigen 19 covid ao an-trano?
A: Eny, misy ny fitsapana matihanina sy ny kitapom-pitsapana ao an-trano
Q: Inona no fotoana itarihana kitapo fitsapana antigen 19 covid?
A: Miankina amin'ny habetsaky ny filaharana.
Q: Firy ny fitsapana afaka omena isan'andro?
A: Manomboka amin'ny 100,000 3,000,000 fitsapana ka hatramin'ny XNUMX ny andrana isan'andro
Q: Manome serivisy labozia manokana na takelaka tsy voapaika ve ianao?
A: Eny, manome kitapo fanandramana OEM / tsy miankina izahay.
Q: Raha amidy amin'ny eropeana izy io?
A: Eny, marika CE
Q: Afaka mivarotra ve ianao kitapo fitsapana antigen 19 covid any Etazonia?
Q: Afaka manome vokatra semi ve ianao?
A: Ie, afaka manome izahay taratasy tsy voapaika ho an'ny fanamboarana fitsapana haingana ny antivy covid 19.
Apetraho Oder Ho an'ny Covid 19 Antigen Rapid Test
Brochure ho an'ny kitapo fanandramana Covid 19
Fanamarihana CE ho an'ny Kitapo fanandramana BALLYA Covid 19
BALLYA-Fanambarana-of-conformity-covid-19-antigen-kitapo fitsapana haingana
Katalaogy fampitaovana na fitaovana ho an'ny famokarana kitapo 19 Covid
Fampianarana ho an'ny fampiasana kitapo fanandramana Covid 19
Data data ho an'ny kitapo fitsapana Covid 19
Takelaka tsy manaparitaka ho an'ny kitapom-bokatra Covid 19
Fitaovana IVD ho an'ny famokarana kitapo fitsapana fizahana fizahana fizarana hafa